MALLOW (STOCK-ROSE): BOGSIINAYA GURYAHA IYO ISTICMAALKA DHIRTA, DAAWOOYINKA - SOOSAARKA DALAGGA
Wadanka ka mid ah dhirta qurxinta quruxda badani waxay tixgelinayaan Waqooyiga Ameerika iyo Afrika. Hase yeeshee, ciraaqiyadayada, waxa soo koraya tan iyo markii la soo dhaafay. Aabayaasheennu waxay isticmaaleen mallow ma aha oo kaliya inuu qurxiyo agagaarka guriga, laakiin sidoo kale ujeedooyin daaweyn. Waan ka hadli doonaa iyaga.
Qaabka daaweynta ee mallow
Flower Mallow - warshad leh daawo, isticmaalka kaas oo ku yaala isugeyntiisa.
Waxaa laga helay:
fitamiinada PP iyo A,
raadadka unugyada birta, zinc, cadmium;
Laakiin qaybta ugu qiimaha badani waa dhuunta dhirta. Thanks to iyaga, dhirta waxaa loo isticmaalaa sida macnaheedu yahay quudinta. Faleebo laga sameeyo mallow waxay leedahay saameyn, sharraxaad iyo saameyn raadraac.
Qodobbada waxtarka leh ee stock-rose, ka badan mallow faa'iido u ah jirka aadanaha
Badanaa, daawada dhaqameed waxay isticmaashaa ubaxyo dabiici ah, laakiin qeybaha kale ee geedka ayaa la isticmaalay. Waxaa loo isticmaalaa sida daaweynta boronkiitada iyo dhuun xanuun, laryngitis, catarrh cunaha iyo cudurrada kale ee neefsashada. Waxa kale oo si fiican u daaweyn kara barar dhuunta caloosha, mindhicirka. Mabda'a ficilku wuxuu ku saleysan yahay xaqiiqda ah in xabku ka jiro dhirta oo ku dhejiya dareenka xididada ee nidaamyada nidaamyadan waxayna ka ilaaliyaan saameynta walxaha xasaasiga ah. Sidaa darteed, xanuunka, bararka iyo bararka guud ahaan waa la yareeyey.
Ma taqaanaa? Qofka ugu dhow ee mallow waa daawada Altea. Waxay heystaan ​​guryaha la midka ah ee dawooyinka, Althaea oo kaliya waxay saameyn ku yeelataa waxtarka badan. Sidoo kale la xidhiidha suntan ayaa ah dammaanad, hibiscus iyo chinabella.
Daawo dhaqameed ayaa sidoo kale qadarisay mallow, sifooyinka faa'iidada leh iyo helitaanka isticmaalka iyaga. Hal mar, daroogada Flores Malvae arboreae nigrae ayaa la soo saaray, laakin maanta waxaa loo isticmaalaa oo keliya in lagu soo saaro cayayaanka iyo boluska.
Qodobbada waxtarka leh ee mallow
Marka lagu daro ubaxa, miraha mallow ayaa loo isticmaalaa daaweynta, 18% oo ah saliidda dufanka leh. Masar hore, iyagoo caawimaadkooda, waxay nadiifiyeen mareenka neef-mareenka ee ka yimaada noolaha waxyeelada leh. Maanta dalalka Carabta waxaa loo isticmaalaa sidii dhir udgoon, oo lagu daro shaah iyo kaafi. Sidaas, si shaaha laga sameeyo mallow, waa ku filan inaad ku shubtid abuurka shaaha aad jeceshahay ee shaaha iyo ku dar malab qaar macaan. Ujeedooyinka daaweynta, abuurka waxaa loo isticmaalaa cystitis, cudurrada maqaarka, sumowga (sida emetic). Waxaa mararka qaar lagula taliyaa wadnaha oo aan shaqeynin, kaadi-celis la'aanta, kaadi-celinta, bararka.
Caleemaha faa'iido leh ee mallow
Si loo yareeyo barar, qufac iyo boronkiitada waxay isticmaalaan caleemaha mallow. Laga soo bilaabo iyaga u diyaariyaan maraqyada iyo fuska, ku dar shaaha. Waxaa lagu tiriyaa waxyaabo ay ka mid yihiin diaphoretic iyo anti-spastic properties. Waxaa la rumeysan yahay in ay sabab u tahay dhismaha cinwaankooda, waxay daweyn karaan colitis, gastritis, xanuunka dysentery. Mallow ee lagu daro daawooyinka kale ee daawada loo isticmaalo diyaarinta decoctions oo leh saameyn anti-bararka iyo jilicsan. Caleemaha ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si loo yareeyo erysipelas maqaarka.
Sida loo isticmaalo asalka sirta
Warshadu waxay leedahay xidid awood leh, taas oo sidoo kale ka heshay codsi daweyn kale. Xiddigta Mallow waxa ku jira xaddiga ugu badan ee xab xasaasiyadeed, kaas oo abaalmarin ku leh dhirta leh hantida faa'iido leh. Laga soo bilaabo waxaa loo diyaariyey decoction, kaas oo lagu dabaqi karo gudaha ama loo isticmaalo sidii wakiil dibadda ah. Tincture of xididka waxaa loo isticmaalaa for cadaadis iyo daaweynta noocyo kala duwan ee caabuq. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, daaweyntu waxay isticmaashay soo saarka ubaxa iyo caleemaha suntan, taas oo yareyneysa barar ku dhaca maqaarka, barar, kor u qaadisid dib-u-kicinta, waxay xoojisaa kiniinka iyo kobcinta jirka ee unugyada. Soo saariddu waxay saameyn wanaagsan ku leedahay korriinka unugyada maqaarka. Sidaa daraadeed, qalabkan waxaa loo adeegsadaa alaabta iyo alaabta nadaafadda carruurta iyo kuwa waaweyn. Mallow waxaa loo isticmaalay daawada dhaqanka ee Shiinaha, halkaas oo xididkeeda loo isticmaalo in lagu daaweeyo boronkiitada, hargabka, oof-wareenka, iyo cudurrada kala duwan ee mareenka caloosha. In Tibet, xididkiisa waxaa loo isticmaalaa diyaarinta diuretics. Iyo bogsashooyinka qadiimka ah ayaa la jarjarey xididka loo isticmaalay si loo fududeeyo geeddi-socodka guud.
Isticmaalka suntan ee daawada dabiiciga ah: cuntada sida caadiga ah
Daawooyinka kale ayaa badiyaa guntooda iyo fusho qaybo kala duwan ama geedka oo dhan. Waxaa loo qaadaa gudaha ama dibedda, iyadoo ku xiran nooca cudurka. Halkaan waxaa ah cuntooyinka caadiga ah ee sarreysa. Qalabka kalluunka mallowgu kuma koobna tallaabo ka hortag ah. Waxaa la ogyahay in ubaxa ku deeqay wax soo saarka melanin, sidaa daraadeed waa la raaciyaa maraqiisa wejiga iyo jidhka si uu u siiyo maqaarka malab malab ah. Waxyaabaha ka soo baxa iyo ka soo bixida stem-shub waxay leeyihiin saamayn jilicsan, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa in soo saarista alaabta qurxinta kala duwan: tonics, kiriimyada, jellar. Iyada oo caloosha iyo inflammation of caloosha ku talin lahaa faleebo geedka. Diyaarso sida soo socota. Qaado oo ah geedo la jarjarey ayaa lagu shubay galaas biyo ah oo karkaraya oo daboolan kulaylka laba saacadood. Cadaadiska, cab cabitaan yar oo diirran. Qaado saddex ilaa afar jeer maalintii. Faleebo waa in lagu keydiyaa qaboojiyaha si aan ka badnayn maalin. Xasaasiyadda, cunaha iyo xanjeerka afkiisa, karootiga ayaa laga diyaariyaa abuurka abuurka. Ku shub qaado shaaha oo ah shinni dhalada oo ku shub weel galaas biyo ah. Ku shub dabka yaryar, ku karkari dabka iyo ku shub dabka shan daqiiqo. Marka goosashadu ay qaboojiso, ku sii daa laba lakab oo faashad ah, ka dibna u isticmaal inaad joojiso saddex ilaa afar jeer maalintii.
Si aad uga takhalusid finanka wajiga wuxuu ka caawin doonaa decoction of 1 garaam oo rooti mallow la jajabiyey, oo ah qaado oo ubaxyo liin, qadarka isla malab iyo galaas biyo ah. Ka dib markii la karkarayo 10 daqiiqo, maraqku waa la qaboojiyaa waxaana loo isticmaalaa maalin kasta maaskaro. Dumarka laga soo uruuriyay geedo yaryar oo ay ka qayb qaataan ubaxyo malaayiin ah ayaa muujiyay waxtarkooda cudurada helminth. Wixii diyaargarowga macneheedu waxay tahay madaxa madaxa toonta, shaaha oo qadhaadh ah iyo soodhin ah oo 200 ml oo biyo ah. Laga soo bilaabo maraq la kariyey gelin enema diiran habeenkii. Carruurta, qaado maraq la kariyey. Pankreatitis waxaa lagu daaweeyaa shubanka ubaxa ee geedka. Waxaa lagama maarmaan ah in la tuujiyo shaaha oo casiir ah kuna walaaq galaas biyo la kariyey. Biyaha waa in lagu daraa dheecaanka shaaha oo malab ah. Isku-darka soo-baxa waxaa la liqaa qadar qaado seddex jeer maalintii kahor cuntada. Malva waxaa si fiican loo isticmaalaa miisaan lumis. 10 g oo ah ubax iyo caleenta mallow ayaa la jajabiyey, ku dar qiime isku mid ah ubaxyada booma oo ku shub hal galaas oo biyo ah. Isku dar waxaa la kariyey 20 daqiiqo, qaboojin iyo geddigoodaba. Maraq Tani waxay sakhraansan tahay muddo bil ah. Ilaha qaarkood waxay ku talinayaan ujeedadan si ay u cabbaan decoction xidid sirta ah.
Waa muhiim! Ubaxa waa qiime gaar ah. dhirta, taas oo ah xaddiga ugu badan ee carotene, fitamiin C iyo sonkor. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad si toos ah uga soo qaadato dhirta. Mallow wuxuu awood u leeyahay in uu ubaxo ubaxyada qaarkood, inkastoo ay u muuqdaan kuwo cusub, oo aan lahayn calaamado ah isdabamarin.
Ma aha waqti dheer ka hor hanti kale oo laga helay mallow - kicinta habka difaaca jirka. Waxaa la rumeysan yahay in tani ay sabab u tahay polysaccharides ku jirta. Calaamada Mallow waxay ka caawisaa luminta xoog iyo dhiig la'aan. 4 qaado oo xididdada jajabiyey ku adkeeyeen litir oo khamri cad cad laba asbuuc meel gudcur qabow leh. Isku darka waa in la ruxaa. Dhamaadka ereyga waxaa lagu sifeeyaa oo lagu keydiyaa qaboojiyaha. Waa lagama maarmaan in la qaato 50 ml 3-4 jeer maalintii. Tilmaamaha ubaxyada mallow waxay leeyihiin saamayn deg deg ah. Si aad u gaarto, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso faleebo oo aad si joogto ah u qaadato. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo inflorescences cusub ama la qalajiyey. Labo shaaha oo alaabta ceeriin ah waa in la burburiyaa, ku shub hal galaas oo biyo karkaraya, kuna adkeyso ugu yaraan saddex saacadood. Ka dibna waxaad cabtaa cabitaan afar jeer maalintii, qaado laba qaado oo ka hor wakhtiga jiifka. Qalabka rajada ayaa sidoo kale lagu dari karaa ubaxyada mallow.
Isticmaalka mallow ee karinta
Isticmaalka ugu weyn ee dhirta ee karinta - Rinjiga cuntada, taas oo laga soo saaro ubaxa of stem-Rose. Mararka qaarkood waxay qurxiyaan macmacaanka. Cabbitaanka Cafiska, caleemaha yar yar ee dhirta ee leh dhadhan macaan ayaa loo isticmaalaa saladh iyo cusbo. Cunnada Carabta ee ku saleysan soodhaha waxay u diyaariyaan maraqa iyo suxuunta kale. Abuurka geedka waxaa lagu daraa cabitaanno kala duwan ama sida xawaash.
Ma taqaanaa? Caleemaha dhalinyarada iyo miraha sirta iyo dhirta la xiriira ayaa xitaa la cuni karaa cayriin. Dad badan ayaa dhadhamiya dhadhankooda.
Mallow (stock-rose): diyaarinta iyo kaydinta qalabka ceecloodka ah
Mallow waa geedo qiimo leh, taas oo ubaxa, caleemaha, xididdada iyo qaybaha kale waxay leeyihiin guryaha daawada. Oo waxaad iyaga u soo ururin kartaa ubaxyada oo idil, oo ubaxyada laga bilaabo Juun ilaa bilowgii cimilada qabow. Ururinta waxaa la sameeyaa horraantii subaxii, ka saareen caleemaha, ubaxa, iyo burooyinkeeda. Isla muddadaas, qodo xididdada geedka. Waxyaabaha qashinka waxaa lagu qalajiyaa hooska hawada cusub, iyaga oo dildillaacaya lakabka khafiifka ah hoostiisa. Haddii qalajinta ay saxantahay, alaabta ceeriin ah ayaa midabkeedu yahay, midabkuna wuxuu leeyahay caraf udgoon.
Waa muhiim! Baqshiinku maaha in qorraxdu si toos ah u socoto! Haddii kale, waxay lumin doonaan midab iyo waxyaabo faa'iido leh.
Ku kaydi alaabta ceeriin ee la kariyey ee bacaha dharka dabiiciga ah. Waa in ay ahaadaan kuwo la joojiyo meel gudcur ah, oo si fiican u hawo leh. Waa mamnuuc in la kaydiyo goobta shaqada ee qorraxda ama ilaha kulaylka: batariyada kuleyliyaha dhexe, qalabka kululeynta iyo waxyaabo kale.
Warshad alwaax waa wax la yaab leh dabeecadda: waxay leedahay tiro aad u badan oo ah guryaha oo waxtar leh mana laha wax ka soo horjeeda. Waxa kaliya ee laga cabsado waa shakhsiyaadka aan loo dulqaadan karin qaybihiisa. Sidaa darteed, ka hor intaadan isticmaalin dhirta daaweynta, kala hadal arrintan dhakhtarkaaga. Mallow - dhirta aadka loo jecel yahay ee xariiqdayada. Dad badan ayaa u isticmaala sida qurxinta ee shukumaan shakhsiyeed. Laakiin warshadu waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh oo loo yaqaan 'aabayaasha'. Isticmaalkeeda ugu weyni waa ka hortag iyo dabacsanaan. Xaaladdan, mallow ma laha wax ka horjeeda. Waa sahlan tahay in la koro, iyo ururinta alaabta ceeriin waxay noqon kartaa dhammaan xagaaga illaa badhtamaha-bisha.